Isbaheys la magac baxay Xaqsoor Hiiraan ayaa ka hor yimid in beel keliya sheegato xilka M/weynaha… – Hagaag.com
Isbaheys la magac baxay Xaqsoor Hiiraan ayaa ka hor yimid in beel keliya sheegato xilka M/weynaha…
Shir ay isugu yimaadeen cuqaal, nabadoono iyo madax ka tirsan Isabahaysiga la magac baxay Xaqsoor Hiiraan oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa loogaga hadlay xaaladaha siyaasadeed ee ka jira dowlad gobelleedka Hirshabelle.
Kulankan ayaa waxaa si gaar ah loogaga dooday arrimaha doorashooyinka Hirshabelle iyo kursiga madaxweynaha Hirshabelle.
Gabgabadii kulankan ayaa waxaa ka soo baxay qodobo ay ka mid yihiin; Isbahaysiga xaqsoor Hiiraan wuxuu adkeynayaa midnimada, wadajirka iyo nabad ku wada noolaanshaha beelaha dega Dowlad Goboleedka Hirshabelle.
Isbahaysiga waxuu caddeynayaa in nidaamka la yiraahdo “Gentleman’s agreement” uu yahay nidaam xadgudub ku ah dastuurka u dagsan dowlad goboleedka Hirshabelle qodobkiisa 47aad faqrooyinkiisa 1 ilaa 6aad.
Isbahaysiga wuxuu cambaraynayaa warkii ka soo baxay Beesha xawaadle ee ahaa iney ayaga bes ah leeyihiin kursiga madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle taasoo khilaafsan Dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle qodobkiisa 47aad, faqradiiisa1-aad oo qeexeysa; in xilka madaxweyne iyo madaxweyne kuxigeenka isu soo sharaxi karaan qofkasta oo muwaadin Soomali ah deggenna gobolada Hirshabelle, ahna muslim, gutana waajibaatka diiniga ah.